Abacre Restaurant Point yokuthengisa (Pos) - Main Page
Abacre Restaurant Point yokuthengisa (Pos)
Kuzuzwe ukulawula full nalo yokudlela ukuphathwa software esizukulwaneni esilandelayo.
Icala okufushane efakiwe-umnyuziki day-30 Thwebula ( 7,24 MB)
Fundiswa ARPOS ngokubheka ngomzuzu-5 flash interactive movie
Top 10 izizathu ukuthenga Abacre Restaurant Point of Sale
Waklonyeliswa ngu esiphezulu Isilinganiselwa kungenzeka:
Buka konke imiklomelo.
Abacre Restaurant Point yokuthengisa isizukulwane esisha software yokudlela zokuphatha for Windows. It is a solution eliphelele, kusukela ngokungenisa oda ezivela abashisekeli, ziphethe nemibiko lokukhokhisa kanye nentela. Zokusetshenziswa ukubonwa is ngokucophelela elungiselelwe for high speed uvo of oda engumxhasi kanye nokuvinjelwa amaphutha ezivamile. Ukuthi yenzelwe usebenzisa kumakhompyutha multiple, futhi iqukethe amazinga ukugunyazwa onokwethenjelwa evikelekile.
Izakhiwo of the bill guest kungenziwa egcizelele, kanti uhlelo kungenziwa umisele yisiphi zezimali, izintela, futhi kwemihlomulo. Izinkokhelo kungenziwa ngamukeleke ukheshi, credit cards noma amasheke.
Ukuze izimenenja, kukhona isethi ocebile imibiko ebonisa ukuthi isithombe oluphelele yokudlela imisebenzi nokuphila Imijikelezo: imenyu ukusetshenziswa, isabelo imvamisa, amahora of high yokudlela mthwalo, amatafula esimatasa kakhulu, abasebenzi iningi abakhuthele, izindlela zokukhokha, futhi othomathikhi kwentela ukubalisisa.
By ekwenzeni yonke inqubo yokudlela management, isofthiwe kakhulu iyathuthuka ekhonza isivinini.
Kulula ukufaka futhi kulula ukuyisebenzisa. Very ilayisense ezingabizi ivumela le software ukuze kusetshenziswe kunoma yiziphi imvelo kusuka zokudlela amancane emndenini-ephethwe kuya ngamaketanga ezinkulu.
Qaphela: Serial kanye ikhishi matrix printer, izingongolo (line nokubukisa letingumdvwebo) kanye cash wokukha asekelwa ngokugcwele!
English , Afrikaans , Albania , Arabic , Armenian , Azerbaijani , IsiBasque , Belarusian , Bengali , Zulu , IsiBulgaria , Catalan , Cebuano , IsiShayina (Esenziwe lula) , IsiShayina (Traditional) , IsiCroatia , Czech , Danish , Dutch , Esperanto , Estonia , IsiFilipino , Finnish , French , Galician , IsiGeorgia , German , Greek , Gujarati , Creole angamaHaiti , Hausa , Hebrew , Hindi , Hmong , IsiHungary , Icelandic , Igbo , Indonesian , Irish , Italian , Japanese , Javanese , Kannada , Khmer , Korean , Lao , IsiLatvia , Lithuanian , EMakedoniya , IsiMalay , IsiMaltese , Maori , Marathi , Mongolian , Nepali , IsiNorway , Persian , Polish , IsiPutukezi , Punjabi , IsiRomania , Russian , Serbian , Slovak , Slovenian , Somali , Spanish , Swahili , Swedish , Tamil , Telugu , Thai , Turkish , Ukrainian , Urdu , Vietnamese , Welsh , Yiddish , Yoruba , Zulu